#Father | Suvadin !
Pawan Bhatta 754 0
Jiwan Poudyal 570 0
खैरो पाइन्ट खैरै सर्ट अनि गोडामा गोल्डस्टारको जुत्ता हातमा पोहोर कुनै पार्टिले प्रशिक्षणमा दिएको झोला बोकेर निस्के बा। हिजो रोपाइ भएकाले आमाले कमिजको टाक हल्दिन भ्याकी थिइनन् उसो त आमालाई आज नि साँहिला काकाको पर्म तिर्न जानुछ । बा’को कमीजमा टाकको साटो पोतेमा उनेको...
Suvadin Desk 968 6
बाउ-आमा र काका
छालाको जुत्ताको दबेको आवाज मेरो कानसम्म आइपुग्यो। चालले नै थाहा पाएँ, वीरसिंह धामी आएछ। अझ भनाैं वीरे आएछ। ढोकाबाट अलिकति चियाएर हेर्यो उसले। ‘के छ छोरा? पढ्दैछौ? पढ है,’ कराउन भ्यायो। म रिसले रननन भएँ। बाहिर निक्लेका दाँत उछिट्टिएर झर्ला भनेको झर्दैन त यसको। कि मै बजााइदिऊँ ब...
Bishwamitra Kuikel 7.5k 0
काठमाडाैं, फागुन २२- बलिउडका चर्चित अविवाहित निर्माता तथा निर्देशक करण जोहर जुडवा सन्तानका बाबु बनेका छन्। करणले सरोगेसीकाे (भाडाकाे काेख) सहारा लिएर दुर्इ सन्तानका बाबु भएका हुन्। करणले अाइतबार अाफु दुर्इ जुडवा सन्तान एक छाेरा र छाेरीकाे बाबु भएकाे घाेषणा गरेका हुन्। करण...
Binita Uprety 304 0
Narayan Khadka 485 0
छोरै चाहिने अन्धविश्वासले परिवारमा दुःखै-दुःख
गोपाल पोखरेल विराटनगर, माघ २८ माघको ठिही, पश्चिमको चिसो हावा। न खुट्टामा जुत्ता चप्पल छ, न आङभरि एकसरो लुगा। सन्तानलाई दुई छाक जाउलो जुटाउनै समस्या छ, दक्षिणी मोरङको सिजुवा–३ का फागुलाल ऋषिदेवलाई। ३८ वर्षीय फागुलालका दुई छोरा र छ छोरी छन्। बर्सेनिजस्तो जन्मिएका छोराछोरीलाई चिसो छल्ने ल...